The Delmore Brothers - Freight Train Boogie (Original King Recording)	Pete Lee
*** Jir-difaaca wadareed ee dabiiciga ah ayaa waxaa sidoo kale loogu yeeraa difaaca saamaynta guud, jir-difaaca saamaynta jaaliyadda, jir-difaaca saamaynta dadweynaha, ama kan saamaynta busladda. Marka loo eego dhinaca Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, midaani waa marka inta badan ee dadweynaha ama kooxi jirkoodu si dabiici ah isaga caabiyo cudur. Difaac dabiici ah macnaheeda waa in uusan xanuunku ku dhici karin dadka, waayo waxa ay qaateen talaal, ama waxaa horay ugu dhacay xanuunka, iyo in uusan ku dhacaynin mar kale, ugu yaraan ilaa in mudo ah. Markii uusan xanuunku ku dhici karin dad badan, waxa ay caawisaa ka hortagga ku dhicista dad kale oo dadweynaha ka tirsan kuwaas oo aan lahayn jir-difaac dabiici ah iyo in ay qaadi karaan cudurka. Jiritaanka jir-difaac wadareedka dabiiciga ah ayaa joojin karta ama yarayn karta faafitaanka cudurka.